Xasan Sheekh Maxamuud"Wax muddo kordhin la dhaho oo dalkaan ka dhacaya ma jiro" - BBC News Somali
Xasan Sheekh Maxamuud"Wax muddo kordhin la dhaho oo dalkaan ka dhacaya ma jiro"
12 Oktoobar 2019
Image caption Xafladdii caleema-saarka Jubbaland
Waxaa ka mid ah xubnaha ka qeybgalaya xaflada caleemasaarka madaxwaynayaashii hore ee Somaaliya Xasan Sh Maxamuud iyo Sh Shariif sh axmed.
Image caption Xasan sh maxamuud
Xafladda caleema saarka ayaa waxaa hareeyay doorashada 2021 oo ay madadii khudbadaha jeedisay ay ka hadleen.
Madaxwaynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sh Maxamed iyo Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa waxay ka hadleen doorashada 2021 iyo sida ay tahay in looga shaqeeyo.
Madaxwaynihii dowladdii KMG ee Soomaaliya sh Shariif Sh Axmed ayaa sheegay in marka uu sanadkan dhammaado loo baahan yahay in la ogaado doorashada soo socota iyo xaalkeeda.
"Anagoo wada naqaano 2020 marka 2021 meeshaa u socono inagoo naqaan inuu sanadkan dhamaado ayaan rabnaa",ayuu yiri Mr sh Shariif.
"Waxaan rabnaa mudnaanta kowaad in la siiyo dastuurka ilaalintiisa,waxaan rabna xuquuqda iyo xorriyaadka dadka Soomaaliyeed inay muqadas noqdaan",ayuu intaa ku daray.
Madaxwaynihii hore ee dowladdii fedraalka ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa ku dheeraaday doorashada soo socota iyo sida ay tahay in waqtiga loo ilaaliyo.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay qaraxii Dhanaane
Madaxweyne Farmaajo baasaboorkee buu ku tagi karaa Mareykanka?
Waxa uu sidoo kale ka digay in dowladda hadda jirta ay waqti kororsi ay isku daydo.
"Waqtida ay shacabka Soomaaliyeed siiyeen dowladda haddii uu dhamaado meelahan luuqyada ayaan wax ka dayaynaa waa xaaraan ",ayuu yiri Mr Xasan Sh.
"Wax muddo kordhin la dhaho oo dalkaan ka dhacaya ma jiro madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo waxaa la siiyay 4 sano waxa uu waqtigi la siiyay ku egyahay 7 bisha February 2021 ",ayuu intaa ku daray.
Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale xusay in dowladda hadda jirta ay haysato waqti dhan 15 bilood oo ay wax ku qaban karto.
"Madaxwayne waqti baad haysataa wali,fursad ayaad wali haysataa 15 bilood ayaa haysataa wali wax baad sameyn kartaa",ayuu yiri Mr Xasan.
Image caption Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir
Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa isaga sidoo kale ka hadlay doorashada Socota ee 2021.
Mr Cabdiraxmaan ayaa uga digay dowladda hadda jirta in ay waqti korarsi ay sameyso.
"Haddii ay amalka doorashada soo xiraan oo ay isku dayaan inay Awoodda korarsadaan dadka Soomaaliyeed dulqaadkii ay ku joogeen waa doorashada,ogaada iridi rajada iyo iridii nabadda Soomaaliya dowladda iyadaa soo xirtay",ayuu yiri Mr Cabdiraxmaan.
Waxa uu intaa ku daray in dowladda ay iyada masuuliyada qaadanayso haddii ay waqti korarsi sameyso.
"Wax alaale iyo wixii masuuliyad ka dhaca halkaasi iyadaa qaadanaysa dowladda",ayuu intaa ku daray.
Madaxwaynaha la caleema saarayay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa dhankiisa doorashada 2021 soo hadal qaaday.
Waxa uu sheegay in 2021 doorasho la qabto ay ka horeyso shaqo badan oo ay tahay in la qabto.
"In bilowga 2021 doorasho la qabto waxay ku xiran tahay in hadda laga sii shaqeeyo ama la yiraahdo tii 2016 ayaan qaadanaynaa ama la yiraahdo waan beekhaaminaynaa oo degmo ayaan gaarsiinaynaa laakiin waa in tallabo la qaato",ayuu yiri Mr Axmed.
"Kiiska doorashada waxyaabaha xasaasiga dhibka keeni karaa waxaa ka mid ah nin walba damac ayaa ku jira",ayuu intaa ku daray.
Doorasha soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 2021 islamarkana waxaa muuqata in ololaha doorashada durba laga dareemayo saaxadda siyaasadda Soomaaliya.